Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: hafa ihany ny teny mivantana amin’ny tena | NewsMada
Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: hafa ihany ny teny mivantana amin’ny tena
Tsy nisy ny fahagagana nefa maro no afaka nandray fanazavana momban’ny sori-dàlana mitondra fiovana ary be ary ireo velom-panantenana. Ho an’ny ankamaron’ny Malagasy nanan-danja manokana iny fitsidihan’ny Papa François iny, raha maro no nanatrika mivantana ny fandalovany sy ny lanonana niarahana taminy ny be sy ny maro tsy nilaozan’ny fanarahana an’ireo hetsika nisehony izay nahafahan’ny rehetra niheno ny teny natsipiny sy ny hafatra napetrany izay namahana hevitra ho tsakotsakon’ny tsirairay sy iarahan’ny maro hidinika. Mbola ny fitiavana ihany no fototry ny hevitra namelan-kafatra nataony ary mba tsy hijanona amin’ny fanaovana resaka ambava fotsiny an’izany dia toko telo no ajoro ho andry fitaizana no antoky ny fitiavana sy fifankatiavana mifehy ny fiarahamonina. Miavaka amin’ny Didy Folo ireto andry telo ireto nohon’ny tsy fanankinana azy amina fandrarana fa nohon’ny fitakiny ezaka ho fanatratrarana ny tanjona. Fandresena avokoa no hiezahana hatrany.
Fandresena ny fahantrana ahafahan’ny rehetra miatrika ny fiainana am-pihajana
Fandresena ny korontana ahafahan’ny rehetra iaraha-monina am-pilaminana
Fandresena ny fanaovana herisetra amin’ny famerenana ny fandriampahalemana hiadanan’ny vahoaka ao anatin’ny rariny.
Rehefa dinihana tsy zava-baovao loatra ny ambeti-kevitra novoaboasan’ny Papa fa fampatsiahivana ny adidy mipetraka amin’ny rehetra tsara sitra-po nefa voadingana eto amin’ny tontolon’ny andavanandro iainana. Nohon’ny fahafahana araky ny maha olombelona dia samy manana ny toe-tsainy avy ny tsirairay ka samy manana ny vetsovetsony eo amin’ny fanitarany ny hevitra any andohany. Ny tsy fitovizana eo amin’izay lafiny izay no antony ilana adi-hevitra izay anaovana fifanakalozan-kevitra ifandresen-dahatra. Eo amin’izay lafiny izay tsy mifanalavitra amin’ny rafitry ny demokrasia ny rakitra fisainana malagasy izay manambara fa ny hevitry ny maro mahataka-davitra. Mipetraka hatreo ny andraikitry ny mpanao pôlitika, andraikitra manana ny hasiny amin’ny famolavolana ny hevitry ny maro ho lalàna mifehy ny rehetra sy ho sori-dàlana fo fitantanana ny raharaha-pirenena.
Nisy ny fihoaram-pefy rehefa mivilivily tsy manaraka an’izay sori-dàlana izay ny làlana diavina ka mifanipaka amin’ny hetahetan’ny maro ny zava-mitranga. Mazava fa mandika ny rariny ny fiseho-javatra toy izany noho izay tsy tokony afa-maina fotsiny izay fantatra fa tompon’andraikitra nahatonga an’izany.